On1.click | တာဂျစ် ဘာသာစကား
... အမည်ကွဲများရှိပြီး တာဂျစ်ကစ္စတန်နှင့် ဥဇဘက္ကစ္စတန်ရှိ တာဂျစ်လူမျိုးမ...
Variety of Persian of Tajikistan and Uzbekistanတမ်းပလိတ်:SHORTDESC:Variety of Persian of Tajikistan and Uzbekistan
တာဂျစ် / တာဂျစ်ကီ
ဖိုင်:"Tajik", written in Cyrillic (тоҷикӣ) and Nastaliq (تاجیکی).svg
၈.၁ million (၆.၄ million in Tajikistan, 2012 UNSD) (2012)e23
အာဖဂန်နစ္စတန် (as form of Dari, hence co-official status with Pashto)
တာဂျစ် သို့ တာဂျစ်ကီ ဘာသာစကား (တာဂျစ်: забо́ни тоҷикӣ́) သည် တာဂျစ်ကီ ပါးရှန်း (တာဂျစ်: форси́и тоҷикӣ́)၊ တတ်ဇီကီ ဟူ၍လည်း အမည်ကွဲများရှိပြီး တာဂျစ်ကစ္စတန်နှင့် ဥဇဘက္ကစ္စတန်ရှိ တာဂျစ်လူမျိုးများ သုံးစွဲသည့် ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ 
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Tajik"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။